အဘဖောရဲ့ စတုဒီသာကျွေးပွဲမှာ အချီကြီး ပွတဲ့ မှော်ဆရာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » အဘဖောရဲ့ စတုဒီသာကျွေးပွဲမှာ အချီကြီး ပွတဲ့ မှော်ဆရာ
Posted by မှော်ဆရာ on Dec 21, 2011 in Celebrity, Entertainment | 26 comments
၀မ်းသာစရာ သတင်းတစ်ခု ကြေငြာပါ့မယ် … မှော်ဆရာ အချီကြီးပွပါပြီ ..။
ဘာကြောင့်လဲ ဘယ်သူတွေကြောင့်လဲ ဆိုတာ အောက်မှာ ဆက်ဖတ်ပါ …။
၁၈ ရက်နေ့က အဘဖောရဲ့ စတုဒီသာကြွေးပွဲကို မှော်ဆရာ တက်ရောက်ဖြစ်ပြီး ရွာထဲက Top Poster ကြီးများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် ..။
အဲဒီလို တွေ့ဆုံပွဲမှာ အမျိုးသားထဲက အသက်အငယ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ မှော်ဆရာကို အားလုံးက အပြစ်မမြင် ၊ အချစ်တွေဝင်ကြပြီးလျှင် သဒ္ဓါတရားများ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်ပြီးသကာလ
တက်ရောက်သူအားလုံးထဲမှ မည်သူမဆို ပွိုင်တစ်သိန်း ပြည့်ပြီး သူကြီးဆီမှ ငွေတစ်သိန်း ထုတ်ယူရတော့မည် ဆိုလျှင် ..
ထိုဆုငွေအား ရေးသားသူမှ မယူပဲ မှော်ဆရာအား ပေးအပ်ချီးမြင့်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း တက်ရောက်သူများမှ တညီတညွတ်ထဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည် ..။
ထိုဆုံးဖြတ်ချက်အား ခိုင်မာစေရန် အလို့ငှာ တက်ေ၇ာက်သူများမှ အောက်တွင် စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည် ….။
ကဲ သူကြီးရေ .. သက်သေခံလက်မှတ်နဲ့ တင်လိုက်ပြီနော် .. တက်ရောက်သူတွေထဲက ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ပွိုင့်တစ်သိန်းရပြီဆိုလျှင် သူတို့က လွဲမယူတော့ပါဘူးတဲ့ ..။မှော်ဆရာကိုပဲ ပေးလိုက်ပါတဲ့..။ အားနာပါးနာနဲ့ပဲ ယူရတော့မှာပါပဲ …..။
နောက်ပြိး အဘဖောကလဲ ပွဲတက်ရောက်သူများထဲမှ မည်သူမဆို အော်ဇီကို အလည်အပတ် အခမဲ့ စားရိတ်ငြိမ်းလိုက်လိုသူများရှိလျှင် ၁၇ယောက်တိတိ ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလဲ လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါသည်။ အော်ဇီကို အလည်အပတ် အခမဲ့ စားရိတ်ငြိမ်းလိုက်လိုသူများ အဘဖောနှင့် ဆက်သွယ်ကြပါရန်…..
ဟဟ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ မှော်ဆရာကတော့ အင်းလေ အသုဘ ဓာတ်ပုံရိုက်တာတောင် ငြိမ်ခိုင်းသေးတာပဲ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့။ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံတော့လည်း ခပ်လန့်လန့်ပါပဲ တော်ကြာ ငြိမ်ခံနေဦးမယ်ဆိုပြီး နားရွက်တောင်မလှုပ်ရဲဘူး။
နာ့ လက်မှတ်ကြီးနော်.. အလွဲသုံးစား မလုပ်နဲ့နော်.. အဲဒီ လက်မှတ်နဲ့ သိန်းပေါင်းထောင်ချီတဲ့ ပရောဂျက်တွေကို ထိုးပေးနေကျ.. အဟိ..
လုပ်ကြပါဦးဟေ့ မဆူး ရွာထဲကို တကယ်ကို မီးနဲ့ရှို့နေပြီ …
အတု လုပ်မှာ စိုးလို့ ၀င်သတိပေးတာ.. သေနပ် နဲ့ လှမ်းပြီး တချက် ဆွဲလိုက်ရမလား.. ဇကာ ပေါက် ဖြစ်သွားမယ် ဘာမှတ်နေလဲ.. ဟွန့်…
စီးပွားရးအကြံပေး၊ နိုင်ငံရေးအကြံပေး၊ လူမှုရေးအကြံပေး
ရှိရှိသမျှ အကြံပေး ခန့်ရမယ် …
ကိုမော်ဆရာ အဲဒီလက်မှတ်တွေက အတုတွေ မယုံရင် ရွာသား ၊ရွာသူ တစ်ယောက်ယောက် မင်္ဂလာဆောင်ရင် ထိုးတဲ့ လက်မှတ်နဲ့တိုက်ကြည့်ပါ…တရားလိုကနေ တရားခံ ဖြစ်မှာဆိုးလို့ သတိပေးပါရစေ….
မှန်လိုက်တာ တညင်သားရယ်… ထိုးမြဲလက်မှတ်မထိုးပေးလိုက်မိတာ အတော်ကံကောင်းသွားတယ်…
ဘာအခုမှ အတုလေး ဘာလေးလုပ်နေတာလဲ
ဟောဒီ့လက်ကြီးနဲ့ ဟောသည်လိုကိုင်ပြီး ဟောသည်လို ထိုးပေးလိုက်တာ
သက်သေခံ အနေနဲ့ ဟိုဘက် လှန်လိုက်ရင် 2012 happy new year မနောဖြူလေး ဆိုတာတောင် တွေ့အုန်းမယ်။
မနောဖြူလေး က အတင်းငြင်းမှာ သေချာနေပြီ။ :grin:
မနောဖြူလေး .. ၉၅၁၅၂ ကျပ်
အခြားပြောစရာတော့ မရှိပါဘူး။ အဘဖောရဲ့ ခင်တက်ထဲ့ လက်မှတ်က ကြောက်ချာဂျီးနော်.. ခင်ရင်တက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ မခင့်တခင်လေးပဲ ကောင်းပါတယ်။ ရွာထဲက ဘယ်သူတွေရော အဘဖော ခင်တာခံချင်ကြသလဲဗျို့…..
တော်ပါသေးရဲ့ .. ချက်စာအုပ်ထဲကလက်မှတ်အစစ်ကို မထိုးမိလိုက်ပေလို့ …
ကိုကိုကြောင့် ၏ စူးရှသော အမြင်အရ
တော်သေးတာပေါ့ ထိုးမြဲလက်မှတ်လေး မထိုးပေးလိုက်လို့
လက်မှတ် တုတု စစ်စစ် တစ်သိန်းကတော့ ယူုရမှာပဲ ..
အခုမှ ဘွာတေးမလုပ်နဲ့ မရဘူးမှတ် ..
ဆိုတော့လည်း အနှီလို အခွင့်အရေးက
ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်….ထင်ရဲ့ ဟူး ….
အတော်ပဲ သဂျီးကို ပေးဖို့ရှိတဲ့အကြွေးက ကိုယ့်ပွိုင့်နဲ့ကိုယ်ဆိုရင် တသက်လုံး စာရေးမှ ကြေလောက်မှာ ခုတော့ မှော်ဆရာဆီကို လွှဲပေးလိုက်ပြီ နော်။
မော်ဆရာ တော်ရာမှာနေပေလို့ပဲ ပညာပေးတာလား
ဒီလက်မှတ်က အစစ်ကြီးပါ တယောက်ထဲထိုးပေးခဲ့ဖူးသေးတယ် ကိုယ့်
ချစ်သူလေးလင်နောက်လိုက်တုန်းက ငွေ သိန်း၁၀၀၀ကို လွဲပေးခဲ့တာပဲ
ကိုမှော် ကျနော့်လက်မှတ်လေးတော့ မရုပ်နဲ့ရေ..
အဲ့ဒါလေးနဲ့ ခံဝန်ခဏခဏ ထိုးနေကျ… အဟီးး..
ကြည့်ရတာ လက်မှတ်တွေကတော့်အစစ်တွေပါပဲ။ ဒါပေမဲ့တနေ့က ရွာထဲရောက်တော့ အဲဒီလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့သူတွေစုနေကြတုန်းရောက်သွားတာ သူတို့ကတိုးတိုးလေးပြောတယ်..
အဲဒီ လက်မှတ်တွေက နေ့စွဲမပါတော့ ဘယ်နေ့က ဆိုတာ မသေချာကြောင်း၊ ဖြစ်နိုင်တာတခုက မှော်ဆရာသူကြီးဆီမှာ ထိတ်တုံးအခတ်ခံရတုန်းက ဒီကောင်လေးက တခါတရံကလွဲလို့ အင်မတန်ရိုးသားကြောင်း ၀ိုင်းထောက်ခံ လက်မှတ်ထိုး ပြီး သူကြီးကို ပွိုင့်တွေ အာမခံပေးထားတာလို့ ပြောသဗျ။
အဘဖောက ကျွန်တော်ကိုပြောတာကတော့ အော်ဇီကိုလာလည်ရင် ဘယ်ရွာသားမဆို မြန်မာငွေ တပြားမှ မကုန်စေရဘူးလို့ အာမခံတယ်ဗျ။ အဲ… ဒေါ်လာလေးတော့ ဆောင်လာခဲ့ပါတဲ့။
မှော်ဆရာ ရိုးသားတာတော့ ပြောမနေနဲ့ ..
မလစ်ရင် ဘာမှကို မလုပ်တာ ။
တစ်ခါတစ်ခါ လိမ်ပြောတာကလွဲရင် ငါးပါးသီလ လုံခြုံတယ် ..
အရက်ဆို အနံ့တောင် မခံနှိုင်လို့ နှာခေါင်းပိတ် သောက်နေရတာလဲ ကြာပြီ …
မှော်ဆရာ နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတခု ရရှိထားပါတယ်။
အထက်ပါ လင့် အတိုင်း သွားကြည့်ကြပါကုန်။